သင်မသိသောနည်းပညာဘလော့ဂ် (၁၀) ခု Martech Zone
သင်မသိသောနည်းပညာဘလော့ဂ် (၁၀) ခု
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 25, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နည်းပညာဘလော့များသည်အရေးကြီးသည် Martech Zone။ တိကျသောနည်းပညာသည်စျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံအကြောင်းကျွန်ုပ်ရေးသည့်အခါ၎င်းသည်နည်းပညာဘလော့ဂ်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုခံရလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်သတင်းနှင့်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ပေမယ့်လက်တွေ့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး applications များအပေါ်လက်လွတ်။
ယောက်ျားကြီးများသည်အစဉ်မပြတ်အကြီးမားဆုံးသောသတင်းသတင်း၊ နောက်ဆုံးအတင်းအဖျင်းကိုရယူရန်သို့မဟုတ်လူတိုင်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလွန်ကြီးစွာသောပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကိုလွှင့်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ နည်းပညာမှာသင်အများကြီးသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေရှိသေးတယ်။ ဤရွေ့ကားရှေးရှေးကထိပ်ပေါ်မှာအမြဲရှိပါတယ်!
ဒီမှာသင်မသိသောနည်းပညာဘလော့ (၁၀) ခုရှိသည်။
Noo ဆိုတာဘာလဲ Patric သည်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ကုမ္ပဏီသည် 'non-techiesies' ကိုသင်ကြားသည်။
ထိတ်လန့် Coding - ဂျက်ဖ်တွင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကြံဥာဏ်ရှိပြီးသူ၏အရေးအသားသည်အမြဲတမ်းရယ်စရာဖြစ်သည်။
Ken McGuire - Ken သည်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနေသည်ကိုဖော်ပြသည်။
ဒါပေမယ့်မင်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ - Tech အာကာသတွင်အမျိုးသမီးအသံများမရှိခြင်း Adria ကဖြည့်နေတယ်
မင်္ဂလာပါ - ဤဘလော့ဂ်သည်နည်းပညာကိုဖတ်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဥပဒေဘလော့ဂ် - အဲရစ်သည်နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်သမားများအပေါ်သက်ရောက်သည့်တရားရုံးအမှုများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
Chip ရဲ့ Quips - နှစ်ရှည်လများမိတ်ဆွေ Martech ZoneChip သည်အင်တာနက်ပေါ်မှအကောင်းဆုံးသတင်းအချို့ကိုအမြဲညှပ်ပေးသည်။
၂ ဝါကျများသို့မဟုတ်လျော့နည်းခြင်း - Chip ၏ရေးသားချက်များထက်တိုတောင်းသော်လည်းသူငယ်ချင်း Bill Dawson သည်နည်းပညာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးသေးငယ်သောဖော်ပြချက်အချို့ပေးသည်။
အမြတ်မှမြေပဲ - ဘလော့၏နောက်ထပ်သူငယ်ချင်း Thor Schrock သည်သူ၏ဘလော့တွင်နည်းပညာနှင့်အမြတ်အစွန်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
Joe ရဲ့နည်းပညာဘလော့တိုင်း - သူငယ်ချင်းကောင်း Jason Bean သည် Joe ၏ဘလော့ဂ်တွင်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဘလော့ဂ်များတွင်တောက်ပြောင်နေသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်မရှိပါ၊ သို့သော်အကြောင်းအရာမှာအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ ဤဘလော့ဂ်များကိုသင်၏စာဖတ်သူဖတ်ရန်ထည့်ပါ၊
Tags: ဖောက်သည် retentionလူမှုရေးဒေတာ
ChaCha ဟာ Google ထက်ပိုပြီးစမတ်ကျပါသလား။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက် 2010 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 24 မိနစ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! အထူးသဖြင့် Jeff Atwood ကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့် ယခုလို ဩဂုတ်လစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။